Marie Sklodowska Curie - 1867 ukuya ku-1934
U-Marie Curie uyaziwa ngokufumana i-radium, kodwa ufezekisile izinto ezininzi. Nantsi i-biography emfutshane yebango lakhe lokubizwa.
NgoNovemba 7, 1867
Julayi 4, 1934
I-Nobel Prize kwiFizikiki (1903) [kunye noHenri Becquerel nomyeni wakhe, Pierre Curie]
I-Nobel Prize eKhemistry (1911)
UMarie Curie uphayona ngophando lwe-radioactivity, Wayeyindoda yokuthobela i-Nobel yokuqala yexesha elibini kunye nomntu oyedwa kuphela onokuwina umvuzo kwiinsayensi ezimbini ezahlukeneyo (iLinus Pauling yaphumelela iMatistry and Peace).
Wayengowokuqala umfazi ukuphumelela umvuzo weNobel. UMarie Curie wayengumprofeshi wokuqala wesifazane eS Sorbonne.
Okunye NgoMaria Sklodowska-Curie okanye uMarie Curie
UMaria Sklodowska wayeyintombi yabafundisi bePoland. Wathatha umsebenzi njengomfundisi emva kokuba uyise elahlekelwe yindleko yakhe ngokutyalomali olubi. Kwakhona wathatha inxaxheba kwi-universist "yunivesithi yamahhala," apho ayifunde khona ePoland kubasebenzi besifazane. Wayesebenza njengePower ePoland ukuxhasa udadewabo osekhulile eParis kwaye ekugqibeleni wajoyina nabo. Wadibana waza watshata noParry Curie ngoxa wayefunda isayensi eS Sorbonne.
Bafunda izinto ezifakwe kwi-radioactive, ngokukodwa i-ore pitchblende. NgoDisemba 26, 1898, iiCuries zamemezela ukuba kukho into engaziwayo yomsakazo efumanekayo kwi-pitchblende eyayinomsebezi ophezulu kune-uranium. Ngaphezulu kweeminyaka emininzi, uMarie noPetros baqhubelela iitoni ze-pitchblende, baqhubela phambili ukugxininisa izinto ezinokusasaza kwaye ekugqibeleni bahlukanise i-chloride salts (i-radium chloride yaphela ngo-Ephreli 20, 1902).
Bafumanisa ezimbini izinto ezintsha zeekhemikhali. " I-Polonium " yabizwa ngokuba yilizwe lakwaCurie, iPoland, kwaye "i-radium" ibizwa ngokuba yi-radioactivity yayo.
Ngo-1903, u- Pierre Curie , uMarie Curie, noHenri Becquerel banikezwa umvuzo weNobel kwiFizikiki, "ekuqapheliseni iinkonzo ezingavamile eziye zenziwa ngophando lwazo oluhlanganyelweyo kwizinto eziye zafunyanwa nguNjingalwazi uHenri Becquerel." Oku kwenza uCurie ibhinqa lokuqala ukuba anikezwe iNdel Prize.
Ngo-1911 uMarie Curie wanikezwa umvuzo weNobel eKhemistry, "ekuqapheliseni iinkonzo zakhe ekuqhubekeni kweekhemistri ngokufumanisa iimeko zeRidimi kunye nePolonium, ngokuzihlukanisa i-radium kunye nokufundwa kohlobo kunye nezixhobo zalo mbonakalo ".
Amacandelo awazange agunyaze inkqubo yokwahlukanisa i-radium, ekhetha ukuvumela ukuba isayensi yoluntu iqhubekele ngokuqhubekayo uphando. UMarie Curie wasweleka kwi-aplasmatic anemia, ngokuqinisekileyo esuka ekungabikho kombane onzima.
I-Modeling Meiosis Lab Isicwangciso seSifundo